वामदेवले भने: संविधान संशोधन गरेर भएपनि म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ – Hamrosandesh.com
वामदेवले भने: संविधान संशोधन गरेर भएपनि म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ
काठमाडौं,२२ मंसिर ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता वामदेव गौतमले आफू प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरेको बताएका छन् ।
त्यस लगत्तै गरिएको वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेको भनेर बुझ्दा के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, के फरक प¥यो त। वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न ? मैले खोजेकै हो। म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचनमा भनिएको हो। २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई। विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईँका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ। अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाईँ नै हो, तपाईँ नै लाग्नुस्। उहाँहरूले नै भनेको हो।